Yaa Ka Masuul Ah Xasuuqa Shacabka Soomaaliyeed Ee AMISOM Ay Geysato?! |
Kuliyada Kal Kaalisanimada – Ma jeceshahay sanadkaan inaad jaamacad bilawdo?
Ilhaan Ciise Maxamed, January 9, 2019
Jaariyad iyo Marwadii Bukaanka Aheed, Qisa layaab leh |Tukesomalism.com
Tuke Somalism, March 3, 2016
Maxaad Ka Taqanaa Falanqaynta SWOT Analysis? |Tukesomalism.com
Cabdijabaar Sh. Axmed, July 9, 2016
Xumaanta Qabyaalladu Leedahay |Tukesomalism.com
Tuke Somalism, April 13, 2016
Cabdicasiis Maxamed Shidane, June 7, 2018
Cashirada Tukaha Laga Barto ee Horumarka Lagu Gaaro
BBC Somali, September 4, 2019
Fahan Shaqsi “Nolosha noolaha waxaa ku xeeran daruufo joogta ah”
Maxamed Cabdirisaaq Diriye, June 15, 2019
Dheecaanka Ku Jira Sambabada (Pleural fluids)
Ciise Cabdullaahi, July 6, 2019
Dhaqaalaha & SiyaasaddaGanacsiga iyo DunidaMaqal & Muuqaal
Yaa Ka Masuul Ah Xasuuqa Shacabka Soomaaliyeed Ee AMISOM Ay Geysato?!
Cabdijabaar Sh. Axmed — February 5, 2016
Ciidanka Afrikaanka ee jooga Muqdisha iyo meelo ka mid ah Soomaaliya oo wataa illaalin nabad, sugid ammaan iyo kalla dambayn soo celin, balse miyaad aragteen waxaas oo dhan? Hubaal in magacan waanagsani dad badan siraayo, gaar ahaan dunidda, iyagoo dha-dhansanaya ujeedka magacu wato, iskana dhaadhicinaya inay yihiin geesiyaal naftooda u huray siddey nabad uga dhigi lahaayeen dalkan loo caasha waayey!, rajo fiican, adduunkuse ma fiiriyay waxa ka dhacaya gudaha dalka Soomaaliya?
Weydiintaan waxay i soo xasuusin, waraaq sir ah oo laga helay midawga Afrika oo muujinaysa in Soomaaliya xasuuq ka dhacay!, haddana laba iskama waraysan, oo sideedii ayaa looga tagay, ama meeshii laga helay lagama qaadin, waaba yaabee nabaddii ay sugayeen ma waxay noqotay sidaas? Midaani waa mid taariikhda gali, ee may sidaan isu dhaammaan?!
Waxaa kalle oo jira baaq ka soo baxay qaramada Midoobay, bartamihii bishii nofeembar ee sanadkan, oo lagu sheegay in baaritaan lagu sameeyo xasuuqa ay gaystaan AMISOM, balse dib ma u maqasheen wax warkiisa wada? Meeshii lagu sheegay ayaa isna loga tagay, halkaan waxaan rabaa inaan Soomaalida dhaliilo, Soomaaliyeey codkaagii maxaa ku dhacaay? Xabashi sidaad ugu mudaharaadey maxaad ugu mudaharaadi la’ dahay AMISON? Mise way idiin kala duwan yihiin? Dilaa waa dilaa mar walba magacaad rabto u baxso!.
Hab dhaqanka AMISOM, wuxuu xaqiijinayaa hirgalinta danaha kalla ah: Sii joogtaynta dhibaatada Soomaaliya: maxaa yeelay waxay dhinac ka noqdeen dhibaatada dalka, waxaanba dhihi karnaa waxay abuureen dhibaatooyin hor leh! sidda eedayn la xiriirta beeridda cudurka dilaaga ah ee AIDS-ka, dhanka kalle habkan ay wax u wadaan dhibaato ma ahane xal kuma imaanayo. Intaa waxaa sii dheer xasuuqa ay maatada rayidka iyo marasta la eegtaan habeen iyo dharaar, iyagoon waxyeelin nabaddiidka iyo kooxaha hubaysan!!!.
Xasuuqa shacabka: qiyaas ahaan ciidamada AMISOM, maalintey duqayn gaystaan, waxay ugu yaraan dilaan 15 qof, oo ka dhigan inay bishii dilaan in ka badan 60 qof!, haddaa ma nabad ayey ilaalshaan mise shacab ayey xasuuqaan?! Burburinta dhaqaalaha: arintani waa bannaantaal, u fiirso markii madfac ku soo dhoco, Bakaaraha ayey u jawaabaan, waa yaabe ma Bakaaraha ayaa madfaca rida? Kaba dhig in dhanka Bakaaraha laga soo riday, ma dawbaa in waa san Bakaaraha duqayn lala duljoogo? Tani waxay kuu muujin ujeedka laga leeyahay duqaynta suuqaa, ee ah cuuryaamin dhaqaale!
Waxaan hadalkeyga kusoo gaba-gabaynayaa dalkaan waxaa iskaleh ummad Soomaaliyeed, waxaana horumar gaarsiini karo waa ummad Soomaaliyeed. Soomaalida waxaa loogu baahanyahay inay isfahmaan iyaga dhexdooda marka horre. Dalkaan dhibaatadiisa cid maanta loogu sheekeynaayo ma jiraan dhalinyaro badan ayaa ku dhacday nasiib daro, oo ay ka mid tahay, nolol aan lahayn fursad, waxbarasho tayo la’aan ah iyo guud ahaan in dhalinta Soomaaliyeed ay noqdaan kuwa caalamka la tartami karo.
Waxaa laga maarmaan ah in la helo ummad taqaano danta dalka iyo dadka guud ahaan. Aniga waxay illa tahay dalkeena wuxuu leeyahay aqqoonyaaho badan balse ma aysan noqonin aqqoonyahanadaas kuwa wax laga dhagaysto, waxay noqdeen kuwa iyaga wax dhagaysto. Maxaa yeelay ummada waxaa ka tan badiyay xamaasada qabyaaladda oo Soomaali dhan gubtay. Soomaalida maanta qurbaha iyo dalkuba waxaa ka haysato arrintaan qabyaaladda ah. Kuwa qurbaha ku nool waxaa loo baahnaa inay noqdaan kuwa ka fiyow arrimaha ku salaysan qabyaaladda. Balse waxaad mooda inaysan wali waxbo iska bedelin dhammaan dadka waa weyn iyo dhalinyaraduba.
Ummada Soomaaliyeed waxay dan ugu jirtaan inay ku dadaal siddii lagu dhisi lahaa tayo ciidan oo dhammaystiran. Dalkaan waxaa oo kali wax u qabani karo waa in la helo ciidan Soomaaliyeed oo xoogan awoodna u leh inay hantaan dhammaan amniga dalka.
Dal walbo wuxuu u baahanyahay dad u fakiro, fahmo dhibaatada dalka wajahaayo marwalbo. Soomaaliya waa dal mudo kusoo jiray dhibaatooyin badan oo ay ka mid yihiin dagaal sokeeyo oo ay dad badan ku dhintaan fikirka qabyaaladda. Sidda aan wada ogsoonahay qabyaaladda waa kansarka ugu weyn ee Soomaalida qabsaday mudooyinkii ugu badnaa ee dalka soo maray. Qabyaaladda waxay iil ka dhigtay dad badan oo aan halkaan lagu soo koobi Karin.
Waxaa hubaal ah in dhammaan ummada Soomaaliyeed ay maanta u nugul yihiin dawladnimada. Cidwalbo oo Soomaali ah maanta aad ayay ugu oomanyihiin inay helaan dowladnimo. Waxaa la wada ogaaday in dagaal wiil ku dhinto mooyee uusan wiil ku dhalanin. Dumar badan ayaa asaay qaaday, ilmo badan ayaa aabahooda ku waayay, dad badan ayaa dalkii ka qaxay, qaar kalena qurbihii ayay kalla kulmeen dhibaatooyin badan oo ay ka mid yihiin midib ka sooc, diin la’aan iyo dhaqankooda oo laga soo horjeestay.
Bal illa daawo…….
Bal illa daawo muuqaalkaan!!!
Next post Cudurka Zika-virus oo Brazil Fara Kulul ku Haya
Previous post Midowga Yurub Ayaa Jaray 20% Mushaarkii AMISOM * Maxay midowga Yurub u maal Gelini waayeen Ciidamada Soomaaliyeed?
Hab Beerista Casriga ah ee Wax Loobeero
Maxamuud Axmed Muuse, June 15, 2019